छाला हेरचाह दिनचर्या किन महत्वपूर्ण छ ? के कुरामा ध्यान दिने ? – Nepali Health
छाला हेरचाह दिनचर्या किन महत्वपूर्ण छ ? के कुरामा ध्यान दिने ?
नेपाली हेल्थ २०७८ फागुन २२ गते ९:१० 0
छालाको हेरचाह सबैका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनकी यसले बाहिरबाट आन्तरिक स्वास्थ्य प्रतिविम्बित गर्दछ।
नियमित हेरचाहले हाम्रो छालालाई स्वस्थ, चम्किलो र सुन्दर बनाउनुका साथै छालालाई समग्रमा राम्रो अवस्थामा राख्छ।
हामीले दिनहुँ छालाका कोशिकाहरू फ्याँक्ने भएकाले छालालाई चम्किलो र स्वस्थ राख्न महत्त्वपूर्ण छ। छाला हेरचाहको दिनचर्याले त्यो काम गर्नेछ।
छाला हेरचाह दिनचर्या किन महत्त्वपूर्ण छ ?
१. यसले छालाको विभिन्न समस्यालाई रोक्न सक्छ
छालाको समस्या लामो समयसम्म रहन सक्छ वा चाँडै आउन र जान सक्छ। छालाको हेरचाह दिनचर्याको बावजुद केही छाला अवस्थाहरू हुन सक्छन्। तर ती मध्ये ठूलो संख्यालाई नियमित हेरचाह गरेर रोक्न सकिन्छ। डन्डिफोर, तैलिय छाला र छिद्र अवरोध जस्ता समस्या छाला हेरचाह दिनचर्याद्वारा हटाउन सकिन्छ।
२. घामबाट सुरक्षा
सनस्क्रिन कुनै पनि छाला हेरचाह दिनचर्याको एक महत्वपूर्ण भाग हो। चर्को घाममा जानुपर्नेले त्यसो गर्न असफल हुँदा छालाको गम्भीर क्षति र केही प्रकारको छालाको क्यान्सर पनि हुन सक्छ। तपाईंले हरेक दिन सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर (एसपीएफ) १५ वा सोभन्दा माथिको सनस्क्रिन लगाउनुपर्छ। यो प्रत्येक दुई घण्टामा लगाउन डाक्टरहरुको सुझाव छ।
३. यसले तपाईंको आत्मविश्वास बढाउँछ
हाम्रो आत्मविश्वासको ठूलो अंश हाम्रो व्यक्तित्व र अरुले हामीलाई हेर्ने तरिकामा आधारित हुन्छ। त्यसैले राम्रो छालाले हामीलाई भित्रबाट पनि राम्रो महसुस गराउँछ। छाला हेरचाह गर्ने दिनचर्या पालना गर्दा हाम्रो छाला स्वस्थ र चम्किलो रहन्छ र आत्मविश्वास पनि बढ्छ। हाम्रो छाला पनि हामी कस्तो महसुस गर्छौं भन्ने प्रतिबिम्ब हो। यदि कुनै व्यक्ति थकित, अल्छी महसुस गरिरहेको छ र राम्रोसँग सुतिरहेको छैन भने, तिनीहरूमा कालो घेराहरू हुन्छन्। यदि कोही राम्रोसँग आराम, ऊर्जावान र खुसी महसुस गर्दै छन् भने, यो उनीहरूको छालामा देखिनेछ।
४. यसले आत्म-हेरचाहको लागि समय बनाउँछ
आजको समयमा, आत्म-हेरचाह (self-care) धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसले हामीलाई आफ्नो ख्याल राख्न र तनाव हटाउन समय दिन्छ। छालाको हेरचाह पनि एक प्रकारको आत्म-हेरचाह हो। किनभने हामी हाम्रो छालाको हेरचाह गर्दैछौं र यसलाई पोषण दिन्छौं। यसले हामीलाई आराम र कायाकल्प महसुस गराउँछ।
५. लामो समयमा पैसा बचत गर्न मद्दत गर्छ
दैनिक आधारमा हाम्रो छालाको राम्रो हेरचाह गर्नाले लामो समयसम्म पैसा बचत गर्न मद्दत गर्नेछ। गहिरो चाउरीपना, हाइपरपिग्मेन्टेसन, एक्ने दाग आदि जस्ता समस्याहरू राम्रो छाला हेरचाह प्रणालीको मद्दतले समाधान गर्न सकिन्छ र छाला विशेषज्ञकहाँ जाने पैसा बचत गर्न सकिन्छ।
तपाईंले छाला हेरचाह दिनचर्यामा के समावेश गर्नुपर्छ ?
छाला हेरचाह दिनचर्यालाई तीन चरणको रूपमा सोच्न सकिन्छ। आफ्नो अनुहार धुनको लागी सफाई, छाला सन्तुलनको लागी टोनिंग र छाला कोमल र हाइड्रेटेड राख्नको लागी मोइस्चराइजिंग। एकचोटि तपाईंले आफ्नो छालाको हेरचाह गर्न थाल्नुभयो भने, यसले हामीलाई अन्य स्वस्थ दिनचर्याहरू समावेश गर्न र स्वस्थ जीवनशैलीको नेतृत्व गर्न प्रेरित गर्न सक्छ।
तपाईंको यस हेरचाहको प्रक्रियामा तपाईंको साझेदार Truederma ले तपाईंलाई सबै प्रोडक्ट्सहरु अत्यन्तै रिसर्च गरेर तयार परेको छ। नियमित रुपमा प्रयोग हुने प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री र लाभदायक हुनुपर्दछ। Truederma को सबै प्रोडक्ट्स छाला रोग विशेषग्यहरु बाट प्रयास र परीक्षण पछि बजारमा ल्याउने गरिन्छ। Truederma एउटा अमेरिकन ब्रान्ड हो जसले अमेरिक, भारत, नेपाल लगायत अन्य देशमा पनि आफ्नो प्रोडक्ट्सको बजारीकरण गरेको छ। -advt
किन सुन्दर बन्न चाहन्छन् महिलाहरु ?